कैलाली भन्सारद्वारा लक्ष्यभन्दा ८ करोड बढी राजस्व संकलन
धनगढी (अस) । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख भन्सार नाका कैलाली भन्सार कार्यालयले चालू आवको पहिलो चौमासमा लक्ष्यभन्दा ८ करोड बढी राजस्व संकलन गरेको छ । सो अवधिमा उक्त भन्सारको राजस्व संकलनको लक्ष्य रू. २ अर्ब ४९ करोड रहेकोमा २ अर्ब ५७ करोड असुली भएको कैलाली भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । भन्सार विभागले कार्यालयलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ८७ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकेको छ ।
यही अनुपातमा राजस्व असुली भए वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी हुने अनुमान कार्यालयका सूचना अधिकारी डिल्लुप्रसाद शर्माले गरे । उनका अनुसार गत आवको प्रथम चौमासिक भन्दा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सो भन्सारबाट ४५ प्रतिशत बढी आयात भएको छ । यो भन्सारबाट पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य वस्तु, मेशिनरी औजार लगायत बढी आयात भइरहेका छन् ।
कैलाली भन्सार नाकाबाट चालू आवको साउन र भदौमा मात्रै साढे ३ अर्बको व्यापार घाटा भएको छ । यो दुई महीनाको अवधिमा ३ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । भन्सार कार्यालय कैलालीले मुख्यगरी त्रिनगर भन्सार नाका, कैलालीको रतनपुर र कञ्चनपुरको बेलौरीसम्मको सीमानाकाबाट हुने आयात निर्यात हेर्ने गरेको छ ।
भन्सार अधिकृत शर्माका अनुसार लकडाउनपछि बजार खुलेकाले आयात बढेको छ । असारदेखि आयात बढेको उनले बताए । यस्तै प्रथम चौमासिकसम्ममा रू. ४ अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको बताइएको छ ।